မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: ထမီဲခြုံသော ကဝေ အစိုးရ..မကြာမီ မျက်လှည့်ပွဲကြီးစတော့မည်။ “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
ထမီဲခြုံသော ကဝေ အစိုးရ..မကြာမီ မျက်လှည့်ပွဲကြီးစတော့မည်။
အမှန်ကတော့ မဲခိုးထားတဲ့ ဘောင်းဘီချွတ် စစ်သား ။၀ိသမလောဘသမား ပေါင်းစားလိုသူများ ။ကြံဖွတ် လူကြမ်းအဖွဲ့သားတွေ ပြည်သူကို ယာဇ်ပူဇော်ဖို့ဒါးရေးပြင်နေကြပြီ။
1. ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကို (ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန) ၊
2. ဗိုလ်ချုပ်လှမင်း (ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး) ၊
3. ဗိုလ်ချုပ်သိန်းဌေး (နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာ့စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန) ၊
4. ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် (နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန) ၊
5. ဦးမြင့်လှိုင် (လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန) ၊
6. ဦးကျော်ဆန်း (ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန) ၊
7. ၀ဏ္ဏကျော်ထင်ဦးဝင်းမြင့် (စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန) ၊
8. ဦးတင့်ဆန်း (ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် အားကစားဝန်ကြီး ဌာန) .
9. ဦးခင်မောင်မြင့် (ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန)
10. ဦးသိန်းထွန်း (ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန) ၊
11. ဦးလှထွန်း (ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန) ၊
12. ဦးသိန်းထိုက် (သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန)၊
13. ဦးဉာဏ်ထွန်းအောင် (ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန) ၊
14. ဦးတင်နိုင်သိန်း (အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန) ၊
15. ဦးဝင်းထွန်း (သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန) ၊
16. ဦးအောင်ကြည် (အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနှင့် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန) ၊
17. ဦးအုန်းမြင့် (သမ၀ါယမ၀န်ကြီးဌာန) ၊
18. ဦးကျော်စွာခိုင် (အမှတ်(၁)စက်မှုဝန်ကြီးဌာန) ၊
19. ဦးစိုးသိန်း၊ (အမှတ်(၂)စက်မှုဝန်ကြီးဌာန) ၊
20. ဦးသန်းဌေး (စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး) ၊
21. ဦးအောင်မင်း (ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန) ၊
22. ဒေါက်တာမြအေး (ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန)၊
23. ဒေါက်တာဖေသက်ခင် (ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန)၊
24. ဦးအေးမြင့် (သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန) ၊
25. သူရဦးမြင့်မောင် (သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန) ၊
26. ဦးခင်ရီ၊ (လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန) ၊
27. ဦးဇော်မင်း (အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန)၊၊
28. ဦးခင်မောင်စိုး (အမှတ်(၂)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန)၊
29. ဦးသိန်းညွန့် (သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန) ၊၊
30. ဦးစိုးမောင် (သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန) ။
(၁) ဗိုလ်ချုပ် ကျော်ညွှန့် (ဒုတိယ၀န်ကြီး ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၂) ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်သော် (ဒုတိယ၀န်ကြီး ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန) ၊
(၃) ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်စံမြင့်(ဒုတိယ၀န်ကြီး ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာန) ၊
(၄) ဗိုလ်ချုပ်ဇော်ဝင်း (ဒုတိယ၀န်ကြီး နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၅) ဦးမောင်မြင့် (ဒုတိယ၀န်ကြီး နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၆) ဒေါက်တာမျိုးမြင့် (ဒုတိယ၀န်ကြီး နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန) ၊
(၇) ဦးစိုးဝင်း (ဒုတိယ၀န်ကြီး ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၈ ) ဦးအုန်းသန်း (ဒုတိယ၀န်ကြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၉) ဦးခင်သော် (ဒုတိယ၀န်ကြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၁ဝ ) ဦးဝင်းသန်း (ဒုတိယဝန်ကြီး ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန် ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၁၁) ဦးစိုးတင့် (ဒုတိယ၀န်ကြီး ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၁၂) ဦးကျော်လွင် (ဒုတိယ၀န်ကြီး ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၁၃) ဒေါက်တာ ကံဇော် (ဒုတိယ၀န်ကြီး အမျိုးးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန)၊
(၁၄) ဒေါက်တာပွင့်ဆန်း (ဒုတိယ၀န်ကြီး စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၁၅) ဦးတင့်လွင် (ဒုတိယ၀န်ကြီး ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်း ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၁၆) ဦးဖုန်းဆွေ (ဒုတိယ၀န်ကြီး လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၁၇) ဦးသန်းထွန်း (ဒုတိယ၀န်ကြီး သမဝါယမ ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၁၈ ) ဦးမြင့်သိန်း (ဒုတိယ၀န်ကြီး အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၁၉) ဦးဝင်းရှိန် (ဒုတိယ၀န်ကြီး ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၂ဝ ) ဦးဌေးအောင် (ဒုတိယ၀န်ကြီး ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၂၁) ဦးသိန်းအောင် (ဒုတိယ၀န်ကြီး အမှတ်(၁) စက်မှု ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၂၂) ဦးမျိုးအောင် (ဒုတိယ၀န်ကြီး အမှတ်(၂) ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၂၃) သူရဦးသောင်းလွင် (ဒုတိယ၀န်ကြီး ရထားပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၂၄) ဦးသန့်ရှင်း (ဒုတိယ၀န်ကြီး ရထားပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၂၅) ဦးစိုးအောင် (ဒုတိယ၀န်ကြီး စွမ်းအင် ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၂၆) ဦးမြင့်ဇော် (ဒုတိယ၀န်ကြီး အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၂၇) ဦးအောင်သန်းဦး (ဒုတိယ၀န်ကြီး အမှတ်(၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၂၈ ) ဦးအေးကြူ (ဒုတိယဝန်ကြီး ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၂၉) ဦးဘရွှေ (ဒုတိယ၀န်ကြီး ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၃ဝ ) ဒေါက်တာ ဒေါ်မြမြအုန်းခင် (ဒုတိယ၀န်ကြီး ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၃၁) ဒေါက်တာဝင်းမြင့် (ဒုတိယ၀န်ကြီး ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၃၂) ဒေါ်သန္တာခင် (ဒုတိယ၀န်ကြီး ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၃၃) ဒေါက်တာ မောင်မောင်ဌေး (ဒုတိယ၀န်ကြီး သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၃၄) ဒေါက်တာကိုကိုဦး (ဒုတိယ၀န်ကြီး သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၃၅) ဦးကျော်ကျော်ဝင်း (ဒုတိယ၀န်ကြီး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၃၆) ဦးအေးမြင့်ကြူ (ဒုတိယ၀န်ကြီး အားကစား ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၃၇) ဦးဟန်စိန် (ဒုတိယ၀န်ကြီး မြန်မာ့စက်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၃၈ ) ဦးချန်မောင် (ဒုတိယ၀န်ကြီး မြန်မာ့စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး ၀န်ကြီးဌာန)၊
(၃၉) ဦးခင်မောင်အေး (ဒုတိယ၀န်ကြီး မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာန)။